Fitantanana momba ny vola
Aza adinona izaho
Fifandraisana sy fanaraha-maso
Pejy 2 amin'ny 2
Ny Orinasa “Nouvelle Lingerie Mauricienne” izay mpiara-miasa mivantana amin’ny fanantontosana io tetikasa io, dia nametraka Tranokala ka ao anatin’izany no ahitana ny fandraisan-tana sy lohahevitra samihafa izay momba ny fandrindrana sy rafitra misy ao amin’ny Asa Sosialy misy eto Madagasikara.
Ao anatin’io lohahevitra io dia ahafahan’ny olona tsirairay izay te hahafantatra misimisy kokoa na hanara-maso ny fitatanam-bola sy ny fampiasana ireo fanomezana samihafa ato anatin’ny orinasa, izay mijanona ho tsiambaratelo tanteraka, nefa ihany koa afaka mahafantatra ny mety ho fivoaran’ireo olona izay sahanin’ny asa sosialy eto amin’ny orinasa l’Avenir.
Izany rehetra izany dia mety ahitana ny zava-misy amin’ny alalan’ny sary na andalan-tsoratra ho fampahafantarana ny toe-java-mitranga ao anaty Asa Sosialy, isam-pianakaviana na koa ny zava-mitranga ivelan’ny rafi-pampianarana, na lanonana sy fandraisana anjara amin’ny lafiny fanatanjahan-tena samihafa.
Hita ao anatin’izany ihany koa ny mety ho vokatry ny fianaran’ireo ankizy ato anatin’ny Asa Sosialy, ny fivoarany na amin’ny lafiny ara-batana na ara-tsaina ary koa ny fampisehoana ny asa izay iandraiketan’izy ireo mandritra izany fotoana izany.
Ireo fianakaviana voakasika manokana amin’izany asa izany dia afaka maneho hevitra malalaka ary ho fanampiana azy ireo dia misy olona voatokana handray an-tanana izany hetahetany izany.
Izany hoe: efa misy olona izay Renim-pianakaviana notendren’ny Société l’Avenir manokana ho amin’izany asa fanaraha-maso ny Asa Sosialy izany, izay natao indrindra iandraikitra io lamin’asa io eo amin’ny fanatsarana sy fampivoarana izay mety ilain’ireo mpikambana tsirairay ao anaty Asa Sosialy. Izy io no mitantana ny “Teti-bola” ny Asa Sosialy ary ny fanarahana ny asa sahan’ny fianakaviana tsirairay ankoatran’ny fianaran’ny ankizy izany hoe: ny mety ho vokatra raisin’izy ireo eo amin’ny fianarana izay ho ataony, ny fandaminana izay mety ho hetsika eo anivon’ny sekoly na ivelany, ny asa fanabeazana manoloana ireo olona izay tsy afa-manoatra amin’izany izay hita tokoa fa mila fanaraha-maso manokana; ary tsy adino ny fanavaozana ny Tranokala sy ny fampandrosoana Sosialy samihafa.
Izy ihany koa no mitana ny andraikitra eo amin’ny fifaneraserana mivantana amin’ireo mpiara-miasa samy hafa sy ireo olona izay voakasika manokana eo amin’ny fampandrosoana ny Asa Sosialy sy ny Tanjona eo amin’ny lafim-pampianarana.
Ny tanjona farany izay tratrarin’ity tetik’asa ity dia fampivelarana ny Asa Sosialy any amin’ny toerana maro samihafa ary koa ho isan’ny tetik’asa izay ho tonga fianarana ho an’ireo izay mikasa hanatanteraka Asa Sosialy any an-toeran-kafa.
<<Teo aloha - Manaraka
[ Miverina ]